» Ciidamada Booliska oo bakaaro dhalinyaro badan ka qabqabtay
Ciidamada Booliska oo bakaaro dhalinyaro badan ka qabqabtay
Dec 7, 2012 - jawaab	Wararka saaka aan ka helayno Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saaka halkaasi ay ka socdaan baaritaano ay sameynayaan ciidamada Booliska.
Taliye ku xigeeenka ciidamada Booliiska ee suuqa Bakaaraha Gaashaanle Saciid Xasan Jimcaale , ayaa sheegay in saaka ay soo qabqabteen tiro dhalinyaro ah oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Alshabaab.
Sidoo kale wuxuu sheegay in qaraxyadii ka dhacay xalay iyo shalay aysan geysan qasaaro xoogan isagoo sheegay in kaliya ay jiraan dhaawacyo yar oo soo gaaray dadkii ka agdhawaa goobta.
Gaashaanle Saciid Xasan,ayaa xusay in walli ay socdaan baaritaano ay ka sameynayaan xaafadaha Suuqa bakaaraha.
Dhanka kale wuxuu ugu baaqay shacabka kusugan suuqa bakaaraha ayaa waxa ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada si amaanka loo xaqjiiyo.
Maalintii shalay qarax ayaa ka dhacay suuqa bakaaraha.
« Warbixinta Ka HoreysayMaandhow Hays Dilin Anna Hay Dilin!! Fanaan Caan ah oo Maqaal Yaab leh diyaariyay	Warbixinta Xigto »Kismaayo oo xalay dhawaqa rasaas laga hurdi waayay iyo shabaab la qabqabtay	Leave a Reply Cancel reply